Disaster and Emergency Response: - Mandalay Catholic Archdiocese
Commission on Disaster and Emergency Response
(သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် အရေးပေါ်ကိစ္စကူညီမှုရေးရာ ကော်မရှင်)
မန္တလေးသာသနာတစ်ဝန်းရှိ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် ရုတ်တရက်ကြုံတွေ့ရသော ဒုက္ခသည် ကက်သလစ် ဘာသာဝင် အားလုံးတို့ သည် စိတ်အားငယ်မှုများ လျော့ပါးစေရန်၊နေထိုင်စားသောက်ရေးနှင့်ကျန်းမာရေးတို့ကို အလျင်းသင့်သလို အကောင်းဆုံး အကူ အညီများ ရရှိခံစားနိုင်စေခြင်းဆီသို့။
ကျွန်ုပ်တို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် အရေးပေါ်ကိစ္စကူညီမှုရေးရာကော်မရှင်သည် မန္တလေးသာသနာတွင်းရှိ ကက်သလစ် ဘာသာဝင်များ မျှော်လင့်မထားသော ဘေးဒုက္ခမျိုးစုံနှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အချိန်၌ သာသနာ့ အကြီး အကဲများ၊ ဒေသခံ လူကြီးများ၊ စေတနာရှင် လုပ်သားပြည်သူများနှင့် လက်တွဲကာ သူတို့ကြုံတွေ့ခံစားနေရသည့် စိတ်ဓာတ်ရေး၊ လူမှုရေး၊ ကာယရေးတို့ကို ဂရုဏာမေတ္တာရှေ့ထားကာ ညီအစ်ကိုမောင်နှမစိတ်ဖြင့် အစွမ်းကုန် ကူညီ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
- ဆေးပညာရှင်၊ ဆရာဝန်၊ သူနာပြုများရှိသည်။
- Karuna, St.Vincent de Paul, Legion of Mary, Parish Pastoral Council (သာသနာ့အကျိုးဆောင်)
- ပီပြင်သောဦးတည်ရည်မှန်းချက်များရှိခြင်း၊ ကား၊ တယ်လီဖုန်း၊ walkie-talkie နှင့်ဆေးဝါးပစ္စည်း အချို့ရှိပါသည်။
- St. Vincent de paul အဖွဲ့၏ ကူညီထောက်ပံ့မှု၊ Karuna အဖွဲ့အစည်း၏ ကူညီထောက်ပံ့မှု
- ပြည်တွင်းပြည်ပစေတနာရှင်များ၏အလှုငွေများ ကျေးရွာအုပ်စု အသီးသီးမှအလှုငွေများ
- ပညာပေးဟောပြောပို့ချမည့် ပညာရှင်များမရှိခြင်း၊ စည်းရုံးရေးသမားကောင်းများလိုအပ်ခြင်း သတင်း ပြန်ကြားရေး၊ သတင်းဆက်သွယ်ရေး
- သတင်းမှတ်တမ်းပြုစုရေး၊ ပညာရှင် (၅) ဦးခန့်လိုအပ်ခြင်း။
- ကျွမ်းကျင်သော ကားမောင်း၊ ကားပြင်သမား (၄) ဦးခန့်လိုအပ်သည်။
- ကျွမ်းကျင်သော စာရင်းအင်းပညာရှင်များ လိုအပ်သည်။
- ၀န်ထမ်းများအတွက် လုံလောက်သော လစာများ မပေးနိုင်ခြင်း။
- ၀န်ထမ်းအင်အားများ မလုံလောက်ပါ။
- ကွန်ပြူတာ ၂ လုံး၊ Email, Internet Website များထားရန်။
- ပစ္စည်းများထားရန် ဂိုဒေါင်မရှိခြင်း။
- အများပြည်သူ အလွယ်တကူ ဆက်သွယ်နိုင်မည့် ဒုက္ခသည် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများ မဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်း။
- အရေးပေါ်သုံး ဆေးသေတ္တာများ မရှိပါ။
- Mobile telephone တစ်လုံးလိုအပ်ပါသည်။
- အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သော walkie-talkie များ လိုအပ်သည်။
- ကား ၃ စီး၊ ဆိုင်ကယ် ၄ စီး၊ စက်ဘီး ၅ စီးခန့်လိုအပ်သည်။
- ရွှေ့ပြောင်း သယ်ဆောင်နိုင်သော ယာယီတဲများ ၁၀လုံးခန့် လိုအပ်သည်။
- တစ်ဦးတည်း စကားပြော စပီကာများ မရှိ၊ အသံချဲ့စက် မရှိ။
- ပညာပေးရေးနှင့် စည်းရုံး လှုံ့ဆော်ရေးအတွက် လက်ကမ်းစာစောင်များ မထုတ်နိုင်ခြင်း
- ချမှတ်ထားသော ဦးတည် ရည်မှန်းချက်များကို ပီပြင်အောင် အကောင်အထည် မဖော်နိုင်ပါ။
- အုပ်စုတိုင်း၌ အလှုငွေလက်ခံရန် ရုံးခန်းများ မဖွင့်နိုင်ပါ။
- မိမိတို့၏လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ကူညီပံ့ပိုးမှုများကိုသက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ အလှုရှင်များ သို့ ပြန်လည်တင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
၁. အရေးပေါ်ဘေးဒုက္ခနှင့် ကြုံတွေ့ရသော ဘေးဒုက္ခသည်များ စိတ်ဓါတ်ရေး၊ လူမှုရေး၊ ကာယရေးတို့၌ စိတ်အားငယ်မှု မရှိစေရအောင် အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေးရုံး၊ ၀န်ထမ်းများ၊ ဂိုဒေါင်များကို တည်ဆောက်မည် ဖြစ်သည်။
1. Responsible person Commission Head
2. Lead group Commission members
3. Expected result ရုံးခန်းများရှိသည့်အတွက်ဒုက္ခသည်များ ဆက်သွယ်ရန် လွယ်ကူသလို အလှူရှင်များ ဆက်သွယ်ရန် လည်း လွယ်ကူလာမည်ဟု မျှော်လင့်သည်။
4. Partners ပြည်တွင်းပြည်ပ အလှူရှင်များ
Implementation June 2007 - June 2012
၂. အရေးပေါ်ဘေးဒုက္ခနှင့် ကြုံတွေ့ရသော ဒုက္ခသည်များ စိတ်ဓါတ်ရေး၌ စိတ်အားငယ်မှု မရှိစေရအောင် မိသားစုတိုင်း ဆီသို့ သွားရောက်အားပေးစကားပြောခြင်း၊ ဆုတောင်းပွဲများ ကျင်းပပေးခြင်း အပူသောကများ ခေတ္တ ခဏပြေငြိမ်း စေဘို့ရန် ဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
2. Lead Group- Commission members
3. Expected result ရုတ်တရက်ကြုံတွေ့ရသော အပူမီးပွားကြောင့် ပူဆွေးသောက ရောက်နေသူများ နှစ်သိမ့်မှု ၊နွေးထွေးမှုကို ခံစားရပြီး မိမိတို့၌ ကူညီအားပေးသူများရှိကြောင်း ယုံကြည်အားကိုးစိတ်၊ လုံခြုံ စိတ်ချစိတ်များ ခံစား ရရှိနိုင်ရန် မျှော်လင့် ထားပါသည်။
4. Partners ဘာသာရေးအကြီးအကဲများ၊ဒေသခံအကြီးအကဲများ၊သီလရှင်များ၊ လူငယ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် Legion of Mary အဖွဲ့ဝင်များ၊
Implementation အရေးပေါ် ဒုက္ခကြုံသည့်အခါ တစ်လအတွင်း (၃)ကြိမ်ပြု သွားကြမည်။ (ဇွန်လ ၂၀၀၇ - ဇွန်လ ၂၀၁၂)
၃. အရေးပေါ်ဘေးဒုက္ခနှင့်ကြုံတွေ့ရသောဒုက္ခသည်များ လူမှုရေး၌စိတ်အားငယ်မှုမရှိစေရအောင်ဖြစ်ပေါ်သည့် နေရာ၌ အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ဒုက္ခသည်များအား ဘေးကင်းလုံခြုံရာသို့ရွှေ့ပြောင်း နေရာချထားခြင်း၊ ကွဲကွာသွားသောမိသားစုဝင်များကိုအမြန်ဆုံး ပြန်လည်တွေ့ဆုံနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း စသည်တို့ကို အကောင် အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
3. Expected Result ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများဖွင့်ပေးခြင်းအားဖြင့် ဒုက္ခသည်များအား လိုအပ်သလို အကူအညီပေးနိုင် သည့်အပြင် သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ ကလေးသူငယ်များနှင့် ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူများအတွက် နေထိုင်ရန် သက်သောင့် သက်သာရှိစေမည်ဟု မျှော်လင့်ထားပါသည်။
4. Partners ဘာသာရေးအကြီးအကဲများဒေသခံတာဝန်ရှိသူများဆရာဝန်များ၊ သူနာပြုများနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများမှလုပ်အားပေးအဖွဲ့ဝင်များ။
Implementation လိုအပ်သလို အရေးပေါ် ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ (ဇွန်လ ၂၀၀၇ - ဇွန်လ ၂၀၁၂)
၄. အရေးပေါ်ဘေးဒုက္ခနှင့်ကြုံတွေ့ရသော ဒုက္ခသည်များ ကာယရေး၌ စိတ်အားငယ်မှုမရှိစေရအောင် အရေးပေါ် ဆေးပေးခန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ အစားအသောက်များ ဝေငှခြင်း၊ အ၀တ်အစားများ ဝေငှခြင်းနှင့် အခြား လူသုံးကုန် ပစ္စည်းများဝေငှခြင်းစသည်တို့ကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
1. Responsible Person Commission Members
2. Lead Group ကြက်ခြေနီအဖွဲ့၊ စိန်ဗင့်ဆင့်အဖွဲ့၊
3. Expected result ဒုက္ခသည်များ၏ ကျန်းမာရေးကို အနီးကပ်ပြုစုနိုင်ပြီး စားရေးသောက်တာနှင့် အ၀တ်အထည်များအတွက် ပူပင်သောကရောက်စရာ လိုတော့မည်မဟုတ်တော့ကြောင်း မျှော်လင့်ပါသည်။
4. Partners ဆရာဝန်များ၊ဒေသခံအကြီးအကဲများ၊ဘာသာရေးအကြီးအကဲများနှင့် စေတနာရှင်များ၊
၅. အရေးပေါ်ဘေးဒုက္ခနှင့် ကြုံတွေ့ရသောဒုက္ခသည်များအား ကူညီထောက်ပံ့နိုင်ရန် အလှူငွေများကို ပြည်တွင်း ပြည်ပ အလှူရှင်များ ထံ အကြောင်းကြားပြီး အလှူငွေ ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
3. Expected result ရံပုံငွေများရှိခြင်းအားဖြင့် ဒုက္ခသည်များအား အမြန်ဆုံးအရေးပေါ် အကူအညီများ ဆောင်ရွက်ပေးသွားနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
4. Partners ဘာသာရေးအကြီးအကဲများ၊ ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျေးရွာများ၊ မြို့များနှင့် သီးသန့်အလှူရှင်များ။
Implementstion အရေးပေါ် လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ (ဇွန်လ ၂၀၀၇ - ဇွန်လ ၂၀၁၂)